Ọ laghachi azụ na 1985 mgbe aha aha mbụ na site na mgbe ahụ, Intanet achọpụtawo ọganihu dị ukwuu nke ngalaba aha njikwa.
Akụkọ Verisign na-ekwu na ụlọ ọrụ ngalaba na 2019 (Q3) nwetara 5.1 porsyento uto kwa afọ, na-akụ ụma n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde nde 360 ​​nde, ndị ga-aga n’ihu na- eto.
Nyere otu mkpa dijitalụ dị n’etiti ọha na eze nke dapat din, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nchịkwa ma ọ bụ otu onye na-ahụ maka dijitalụ, iji nweta aha ngalaba.
Ọ Bụrụ na ịnweghi otu ma, maọbụ naanị chọrọ obere nduzi na aha ngalaba, wee na-agụ ihe. Kahit anong ga-ekekọrịta nkọwa gbasara otu esi azụ ma denye aha ọhụrụ maka ndị na-amalite!
WHSR nweta ụgwọ ntinye akwụkwọ site n’aka ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na nilalamanokwu a. O na-ewe ọtụtụ mgbalị na ego iji mepụta ọdịnaya bara uru dị ka NKE isang – isang kwadoro nkwado GI NKE ukwuu.
3 Pinakamahusay na mga Generator ng ngalaba Aha
3.6 6- Tagabenta ng Pangalan ng Negosyo
7.5 2- Iji Ngwudata Atụmatụ Ntanetị Online
Ọ bụ nilalaman okwu nke okwu a na-apụghị ịghọta na, mgbe ịdebere na ihe nchọgharị ahụ, redire onye ọrụ na IP gị.
Ị na-ahụ, mgbe e kere weebụ, ọ na-abịakarị na adreesị pụrụ iche a maara dị ka ngalaba Aha Servers (DNS) nke na – adịkarị ka nke a:
Nke a siri ike ịmalite ma bido. Nke bụ ihe mere ngalaba aha pụrụ iche ga-adị mfe maka ndị ọrụ iji cheta ma pịnye.
Debe ya dị mkpụmkpụ ma dị mfe icheta (ngalaba anyị "Ipinakita ang Lihim ng Pagho-host ng Web" bụ ihe ọjọọ!)
Dee ya ma gụọ ya ugboro ugboroon ịzụta (ihe atụ – kpachara anya ma ọ bụrụ na aha azụmahịa gị bụ "Dickson Web")
* Mara: needchọghị nilalamanokwu okwu na ngalaba aha gị iji bulie nke ọma na Google n’oge a. Mana ọ bụ ezigbo echiche ịkọ nilalamanokwu ngalaba gị na nilalaman okwu gị dị ka ọ ga-enye ndị ọbịa din ang mbụ echiche ngwa ngwa ihe weebụsaịtị gị gbasara.
Pinakamahusay na mga Generator ng ngalaba Aha
Ịkpọ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na weebụsaịtị na ịmepụta ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, ị nwere ike iji ọtụtụ awa tụgharịa uche maka aha, naanị iji mejupụta ndepụta nke crappy.
Ebe a bụ ole na ole ngalaba aha generators iji nyere gị aka iche echiche ngalaba aha echiche.
* Pịa oyiyi iji hụchalụ hindi ko alam na-esonụ na ngalaba ngwaọrụ.
Ang domainr ga-agbakwunye ay hindi ako makakakuha ng pagkamalikhain ng ngalaba aha gị site n’itinye atụgharị ọzọ. Gaa na: Domainr.com
Ibị ụrụ Wordoid na-aga ịmepụta aha ndị na-enweghị aha ma ọ bụ maliliit na nilalaman na nakakapunta ako sa jiri ya mee ihe. Gaa na: Wordoid.com
Aha Aha Na-edepụta aha random na ma na-enweghị mkpokọta mkpokọta. Gaa na: AhaStation.com
Lean ngalaba Paghahanap bụ nyocha ọchụchọ dị mfe maka ịchọta aha ngalaba dịnụ. Ngwaọrụ ahụ na-enyere ndị ọrụ aka ịchọta ngalaba aha site na ịchọta okwu ọchụchọ na nilalamanokwu ndị ọzọ a na-ahụkarị na ngalaba aha. Ngwaọrụ ahu Bu Automattic (Ulo Oru n’azụ WordPress.com) na 2013. Gaa na: LeanDomainSearch.com
6- Tagabenta ng Pangalan ng Negosyo
Mamili ng Pangalan ng Negosyo na Tagabuo ng Negosyo na ito ay g n aka n’ịwa azụmahịa aha na lelee ngalaba aha nnweta. Malite site na ịhọrọ nilalamanokwu ị chọrọ ka ngalaba gị gụnye, ị ga-enweta ọtụtụ narị aro. Gaa na: Shopify Pangalan ng Negosyo ng Tagabuo.
Hindi mo alam kung ano ang iyong pag-uusapan na ito (amara dị ka TLD). Na ihe atụ a na NameCheap, isang .com na naglabas na-akwụ $ 10.98 / af me ma ọhọrụ na otu ọnụahịa. Hindi, kung saan, astorestore ang iyong $ 4.99 / afọ na kung saan ay $ 48.88 / mula sa igharịa.
Ya mere, lugar ị gaa n’ihu wee nweta aha ọhụrụ aha, ejiri m n’aka na enwere ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ ịchọrọ ịjụ. Hindi ba:
Aziza ya? Ọ dabere.
Ebee ka e si zụọ ngalaba aha na (nd-na-edebanye aha dị iche iche dị iche iche)
Ogologo din ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịchọrọ (atụ: ịgbakwunye nzuzo ngalaba, ịga maka ọtụtụ afọ, wdg.)
Ọ bụ ezie na ọ na-esiri nakikita ịkọ kpọmkwem ókè ngalaba aha nwere nalalaman na-efu, ị nwere nakikitang na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ọ bụla n’etiti $ 2 na $ 20 kwa afọ, dabere na ego ọ bụla ma ọ bụ pụrụ iche n’elu ikpo okwu na-enye.
Ụkpụrụ nilalaman nke ọma bụ na ọpụpụ ngalaba (.global, .design ,, .cheap) nwere ike mom ugwo karịa ọnụego ngalaba (.com, .net), ebe ọ bụ na e mepụtara ha n’oge na-adịbeghị anya .
Ang ND # MỌD # # 1 – maaari bang makita ang nweta ngalaba akwụghị ụgwọ site n’aka ụfọdụ ndị na-eweta mba, g Ennyere Enwe Mmasị na Hostinger. Iji dota ndi Ahia ọhụrụ, ụfọdụ Ulo Oru Bochum Na-enye ndi Ahia Ahia Mbu ngalaba n’efu. Yobob na na-akwado weebụsaịtị maka rin mbụ, ị nwere ike ịchekwa ụfọdụ ego site na ịnabata ndị ọbịa weebụ a.
NDMỌD # # 2 – NameCheap na – akwado nkwalite pụrụ iche kwa ọnwa – ị nwere ike lelee ibe weebụ ha lugar ịzụta ngalaba ọhụrụ.
Enwere uru na ọghọm dị na ụzọ abụọ ahụ mana n’ikpeazụ, ọ dị n’aka gị ma ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka adreesị dị oke ọnụ ma ama ama (ngalaba ndị na-arụ ọrụ) ma ọ bụ ndị dị ọnụ maka ngalaba ọhụrụ).
Dị ka e kwuru na mbụ – A ezigbo aha ngalaba nwere ike ịbụ ihe na-ekpebi ihe na-eme ma ọ bụ agbaji ika gị, ya lang jiri aka gị họrọ otu.
Ugbu a na ị kpebiri na ngalaba aha dị egwu, ọ bụ din ako iji chọpụta ma aha ngalaba ahụ ị chọrọ nwere dị ma ọ bụ.
Na-enyocha ma ngalaba aha nnweta dị mfe. Ị nwere ike ime nchọpụta dị mfe na otu n’ime ngalaba na-edebanye aha; Ma o Bu, Jiri sistemụ ọchụchọ Whois iji nyochaa ma aha ngalaba GI dị ma O Bu na e ay.
Ọ bụrụ na ngalaba aha ị chọrọ adịghị adị, gbalịa ịhụ ma ọ bụrụ na mgbatị dị iche dịnụ kama.
Ike nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ngalaba aha dị Hover.
Aha ngalaba ị họọrọ zuru okay ma kwenyesiri nakakakita na ọ dị, ugbu a ọ bụ din itinye aha ngalaba n’onwe ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ozi nzuzo gị na oghe, ị nwere ike ịhọrọ ịdenye aha ngalaba gị na nzuzo ka ị ghara ịchekwa ozi kọntaktị gị n’aka ọha na eze.
Ọnụahịa maka iji ọrụ ndebanye aha nzuzo nwere ike ịdị iche ma na emekarị, ọ na – e $ 10 – $ 15 kwa afọ.
Nwere ike ịdebanye aha ngalaba ma ọ bụrụ na ọ dị. Mana, olee otu ị si eme nke ahụ?
Ụzọ kacha mma bụ ịga ụlọ ọrụ na-edeba aha na ngalaba. Isang ngalaba regsitrar ga-ekwe ka ị denyere aha gị na ngalaba aha ma site kwa afọ mga kontrata ma ọ bụ isang ogologo din nkwekọrịta.
123 Reg £ 11.99 £ 11 .99 £ 4 .99 / afọ
Domain.com $ 9.99 / afọ $ 10.99 / afọ –
Gandi € 12.54 / afọ € 16.50 / afọ –
GoDaddy $ 12.17 / afọ $ 12.17 / afọ $ 7.99 / afọ
Hover $ 12.99 / afọ $ 15.49 / AFO Libre
Aha Murang $ 10.69 / afọ $ 12.88 / afọ Libre
Ngwọta Ntanetị $ 34.99 / afọ $ 32.99 / afọ $ 9.99 / afọ
Ngalaba dị oké ọnụ ahịa nwere ike iru ọtụtụ puku dolyar ma mgbe nke ahụ gasịrị, ụgwọ akwụmụgwọ ahụ bụ ọnụ ọgụgụ dị mma ($ 10 – $ 15 kwa afọ).
Cloudflare emeela aha ha na-edebanye aha ha nke na-enweghị ọnụahịa ntinye ego ma na-enye ọnụahịa ahịa maka TLDs dịka .com, .net, .io, na wdg. Ugbu a, ụrụ ahụ bụ nanị ndị ahịa Cloudflare dị ugbu a nakwa na ha ga – debanye aka na Ntinye Mmalite ha a ga-akpọtụrụ akwụkwọ ahụ na usoro ihe omume ahụ.
Ike nwere ike ịzụta ngalaba aha ozugbo site na onye na-arụ ọrụ weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nhazi?
Ụfọdụ n’ime ndị na-ewu ụlọ ọrụ kacha mma taa, dị ka Wix o Obi ọjọọ, ga-enye gị ngalaba aha omenala n’efu maka otu afọ ma ọ bụrụ na ị debanyere atụmatụ ha kwa afọ.
Dahil dito, ang aking sarili ay nakakakita kung paano ako nakikilala na ang $ 19.95 kwa ay $.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ọnụ ahịa tụnyere ịdenye ngalaba onwe gị, uru nke ịzụta ngalaba aha omenala site na onye na-ewu ihe na weebụ bụ na ị nwere na nakikita ko na ganyan -enweghị.
Ike nwere ike ịhọrọ ịzụta ngalaba na-arụsi ọrụ nakakakita ma nyefee ikike site na ọrụ ndị dị ka aha ngalaba aha.
Aha njirimara na-adabere na nnwere onwe nke ndị ọzọ nwere onwe ha nke na-enyere aka n’ịzụ ahịa nke ngalaba aha na ịntanetị. Ebe ndị a na-enye ụzọ dị mma maka ndị zụrụ ịzụta aha ngalaba site n’aka ndị na-ere ákwà na-achọ ka ha hapụ aha ha.
E nwere ọtụtụ aha ngalaba aha ndị ọrụ dịnụ, mana ebe a bụ ole na ole ị nwere ike ịlele: Escrow.com, Sedo, na BuyDomains.
Ka anyong kwuo na ị chọtara ngalaba aha ma ma gị ma onye ire ere ahụ kpebiri na ego. Ang conundrum na-aghọ: Olee otú ị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ego ma jide n’aka na onye nwe na-enyefe ngalaba ngalaba gị?
Hindi mo alam ang iba pang mga tao. Ike nwere ike iji ọrụ escrow iji jide n’aka na azụmahịa ahụ na-aga n’ihu. Kedu ka i si eme nke ahụ? Nke a bụ otú:
Debe azụmahịa n’etiti gị na onye na bago yan
Isang na-esi n’aka onye na-erere gị aha ngalaba ahụ
Ị ga – ekwenye na ụlọ ọrụ escrow na nwe nke aha ngalaba ahụ ebutela gị. Ang Jiri WHOIS o WHSR Web Host Spy ay mag-i-click sa aking profile..
Onye na-ere ere na-anata ego site na saịtị ọrụ escrow
Ụlọ ọrụ ahụ ga-achọpụta na gawaela ngalaba aha ahụ ma ha ga-enye onye na-ere ya ego ahụ, na-efu ego ha. (IkeỊ ikp ik ik ik ik ik ik ik ikụụụụụụụụụụụọ ụụọụọọọọ ọ
Mgbe ị na-achọ maka ngalaba aha mbụ, nke a na-ahụkarị na ọrụ ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ya onwe ha, na ụlọ ahịa ndị ịre ahịa – ị ga-achọpụta na uru ha nwere nwere nakakakita ako site bụla site na ole na ole dolyar ruo elu ma ọ bụ isii ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ asaa.
Gusto ko bang makita ang gagawing aba ebe kachasị mma iji nweta ngalaba aha ma ọ bụrụ na ị na-amalite.
Ot’u otu ihe di ka ogologo, asusu, ihe di iche iche, na ndu ndi mmadu. Enweghị usoro ọ bụla nwere ike inye gị ụgwọ zuru oke. Otú e dị, e nwere ụzọ, iji nye gị atụmatụ ntụrụndụ nke aha ngalaba ma ọ chọrọ ntakịrị nyocha nke gị.
Ọchịchị dị mma nke nilalaman iji ghọta otú e si jiri ngalaba kpọrọ ihe bụ site n’ịle ahịa ahịa ndị na-adịbeghị anya. Ile anya na ahịa ndị a na-adịbeghị anya nwere ike ịnye gị otu ụdị ngalaba a na-azụ na maka ole.
Ihe DNJournal a a ngalaba ahịa akụkọ nke ha na-emelite ma na ya, ha depụtara aha ngalaba ndị na-ere n’oge na-adịbeghị anya site n’aka ọtụtụ ọrụ ngalaba. Mgbe ị na-elele anya, gee ntị na nilalamanokwu nke ngalaba ahụ, ogologo, na wala akong nakikitang metụtara ya iji nweta echiche nke otu aha aha njirimara.
Akụkọ nchịkwa ahịa mpaghara bipụtara na DN Journal (Mayo 2018)
Nseta ihuenyo nke DN Journal ngalaba ulat ng benta.
Ọ dị mkpa iburu n’uche na akụkọ ahụ na-ekpuchi obere ọnụ ọgụgụ ngalaba aha, ya basta, ọ bụghị kpọmkwem ndepụta kachasị.
2- Iji Ngwudata Atụmatụ Ntanetị Online
Ụfọdụ n’ime saịtị ndị ị nwere ike ịlele bụ Estibot, WebOutlook, at Nyochaa URL.
Ebe ndị a chọpụta uru nke ngalaba na-eji ihe metụtara SEO dị ka ogo ọchụchọ, isiokwu, Alexa ọkwa, nyocha ọ bụla, ọnụ ọgụgụ nke ọchụchọ, na ụgwọ kwa click.
Otu ihe ịchọrọ bụ na saịtị dị iche iche nwere ike ịnye gị atụmatụ dị iche iche. Atụmatụ dị mma ga-eji ọtụtụ ebe dị iche iche ma jiri ha tụnyere ịnye gị nyocha dị mma nke aha ngalaba aha.
Sa katunayan, enwereghi ugwo ego maka ịzụta ngalaba aha ma ị nwere ike ichere ha ka ha na-agbanwe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta izugbe ngalaba aha, ị nwere ike ịga na saịtị dịka Ebum n’uche o Zụrụ ngalaba iji nwee mmetụta maka ụgwọ.
Site ugbu a, ị ga-enwerịrị ozi zuru okay iji nyere gị aka denyere aha aha omenala maka akara ma ọ bụ azụmahịa gị onwe gị.
Ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ụlọ ma ọ bụ na ngalaba na-edeba aha saịtị, nwere ngalaba aha kwesịrị ịbụ ihe mbụ ị mechara nangyari ị na-ebi ndụ. Ozugbo i nwetara nke ahụ, rin eruola ka ị lekwasị anya iwu ulo oru gi.